डायस्पोरिक पत्रकारिता र फेसबुके पत्रकारिता
डायस्पोराका नेपालीहरूको आकार बढेसँगै नेपाली डायस्पोरिक पत्रकारिता पनि झाँगिदै गएको छ । अनेक चुनौतिकाबीच युरोपेली डायस्पोरामा पनि नेपाली पत्रकारिताले आफ्नो अहम् जिम्मेवारी एक हदसम्म निर्वाह गरेको छ ।
इन्टरनेट र अनेकन् विद्युतिय साधनहरूको विकाससँगै पत्रकारिताको फाँट फराकिलो भएको छ । संचारको डिजिटल विकाससँगै हात-हातका स्मार्टफोन संसारभरिको संजालमा जोडिएपछि ‘नागरिक पत्रकारिता’ अर्थात् हरेक नागरिक संचारकर्मी हुन् भन्ने तथ्य व्यवहारतः स्थापित भएको छ । जसले गर्दा फेसबुके (पत्रकार) देखि ट्विटे, इन्स्ट्राग्राम संप्रेषक र ब्लगरहरूले संचारलाई सहज र ब्यापक बनाएका छन् । तैपनि विषयवस्तु र प्रस्तुतिको ज्ञान भएका दक्ष पत्रकारहरूको महत्व छँदैछ ।
प्रवासमा पत्रकारितालाई व्यवसायीक बनाउने कुरा गफभन्दा ज्यादा हुन सकेको छैन । तर, समुदायको सेतु भने अवस्य भएका छन् । यस्ता मिडियाहरू आम्दानी र सुविधाभन्दा पनि भाषाको माया र समुदायको सन्निध्यताले चलेका छन् र यो एकप्रकारको स्वयंसेवा बनेको छ । यो स्वयंसेवी पत्रकारितामा श्रम, सम्पत्ति र समय खर्च गरेर पाइने एउटै परमानन्द हो- आत्मरति । पत्रकारको लागि प्रवासी पत्रकारिता आत्मरति भए पनि नेपाली समुदायको उत्थानमा यो ठुलो योगदान हो ।
प्रवासी पत्रकारितामा गहकिला मुद्दाहरूको उठान यदाकदा देखिए पनि ज्यादातर समाचार संघ-संस्था गठन, तिनको नेतृत्व परिवर्तन, भलिबल, पिकनिक र साँस्कृतिक कार्यक्रमहरू कै सेरोफेरोका समाचारहरूले भरिएका पाइन्छन् । त्यससँग खादा, माला र सम्मानका कुरा जोडिएका हुन्छन् । त्यसबाहेक, एउटाको पक्षपोषण गर्दै अरू कसैलाई ओल्टाईपल्टाई गाली गर्ने र समाचारमा धेरै क्लिक पाउन ‘हक्की’ पत्रकारिता गर्नेहरू पनि छन् ।
प्रवासी पत्रकारिताको विकासक्रममा केही चाकडी र केही विकृतिले लेपिएका समाचारहरू देखिनु आश्चर्यको कुरा होइन । सबै क्षेत्रमा धेरथोर हुन्छ नै । कति त हाम्रै माउ देशको राजनीति र सामाजिक विसंगतिका ‘बाइप्रोडक्ट’ हुन् । जेजसो होस् टिपनटापन समाचार अपडेट गर्ने मिडियाहरू अहिले धेरै परिपक्व देखिन थालेका छन् । यो सकरात्मक पाटो हो । तर, हामीले चाहेको यति मात्र होइन ।
युरोपेली डायस्पोराको पत्रकारिताको अपरिहार्यता सिद्ध गर्न अनेक तर्कहरू दिन सकिन्छ । अनेक बुँदाहरूलार्इ ब्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसको विवेचनालाई थाँति राखौं यहाँ र सोधौं- यहाँ बस्दै आएका नेपाली समुदायले कर्मभूमि वा मातृभूमिका मूलधार समाचार मात्र पढेर पुग्छ की आफै बसेको समुदायको समाचार पनि आवश्यक हुन्छ ?
यहाँ बसेर सामुदायीक पत्रकारिता गर्नेलाई नेपाल वा युरोपेली सरकारहरूबाट अनुदान वा कुनै सहयोग आउँदैन । यहाँ मिडिया चलाएर यहाँ कै स्तरमा सरदर आम्दानीको श्रोत बनाउन पनि कठिन छ । समुदायमै रहेका व्यवसायी वा सफल पेशेवरबाट आउने विज्ञापन, ग्राहक शुःल्क वा सुविधा मात्रै हो स्थानीय मिडियाकर्मीको आम्दानीको श्रोत । गुगल वा अरू कुनै प्रतिष्ठानको विज्ञापन राखेर आयश्रोत बढाउन पनि कम्युनिटी पत्रकारिताबाट संभव छैन । त्यसैले समुदायका अगुवा, व्यवसायी र सज्जन वर्गले स्थानीय मिडियाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । पत्रकार धानिन सक्ने यही हार्दिकतामा नै हो ।
युरोपेली डायस्पोराको मूलभूत पत्रकारिता भनेको अनलाइन मिडिया नै हुन् । यद्यपि टिभी प्रसारण र प्रिन्ट मिडियाहरूको उपस्थिति हुँदै नभएका होइनन् । ज्यादाजसो अनलाइन पत्रिकाहरू पानीका फोका जस्ता छन् भने थोरै मात्रले निरन्तरता दिन सकेका छन् । थोरैले मात्र स्थापित पहिचानलार्इ निरन्तरता दिन सफल भएका छन् । यीनै हुन्- युरोपेली डायस्पोरिक पत्रकारिताको विकासको कडी । निःसन्देह, युरोपको नेपाली समुदायलाई उकास्न र माैलाउन यसले टेवा दिन्छ । डायस्पोरामा रहेर कलम चलाउनेहरूलार्इ प्रोत्साहन गराैं । (http://www.panchampost.com)
२०७५ कार्तिक १६ शुक्रबार ११:३१:०० मा प्रकाशित
बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले लोकतन्त्र दिवसका दिन आफ्नो फेसबुकमा निकै तिखो प्रतिक्रिया लेखे– ‘लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा भन्नुपर्ने एउटै
प्रेस स्वतन्त्रता र ‘बयलगाडा गणतन्त्र’
सरकार किन प्रेससँग तर्सिरहेको छ ? तर्सिएको होईन भने किन एकपछि अर्को गर्दै पत्रकारविरुध्द वर्षिरहेको छ त ? अहिले सरकार र प्रेसको सम्बन्धलाई लिएर
ललिता निवासको जग्गा अपचलनका विषयमा
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अप्रतिम नेता तथा दानवीरताका लागि विख्यात सुवर्ण शमशेर जबराले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको काठमाडौ, बालुवाटारस्थित
प्रधानमन्त्री किन सेना परिचालन गर्न चाहन्छन् ?
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली कार्यकारीका रूपमा स्थापित गरेको छ । दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान स्थिरताका